नेपालमा भाडामा पाउन थाल्यो सेक्स डल यसरी सजिलै पाईन छ भाडामा सेक्स डल !
भाडामा पाउन थाल्यो यौन पुतली अविवाहित र एकल पुरुषहरुको आकर्षण बढी ! पुतलीलाई छुदाँ विभिन्न किसिमका कामोत्तेजक आवाजहरु निकाल्न पनि सकिन्छ
सेक्स डल प्रति आकर्षित हुने तर खरिद गर्न नसक्ने ब्यक्तिहरुलाई लक्षित गरेर चीनमा भाडामा सेक्स डल उपलब्ध गराउने सेवा शुरु भएको छ ।टच नामक यौन सामग्रीहरु निर्माण गर्दै आएको कम्पनीको एक शाखाले बेईजिङमा यौन पुतलीहरु भाडामा दिने
यसरी भाडामा दिने यौन पुतलीहरुको वनावट चाइनिज, रसियन, कोरियन र हङकङका युवतीको अनुहारसंग मेल खाने किसिमले निर्माण गरिएको छ । सेक्स डललाई अर्डर गर्न कम्पनीले निर्माण गरेको एप मार्फत् गर्न पाईन्छ । एप मार्फत् आफुले चाहेको सेक्स डललाई अग्रिम अर्डर गर्नुपर्छ । अर्डर गर्दा ग्राहकले पुतलीको ड्रेस, हेयरस्टाइल र अन्य आकर्षण बढाउने सामग्रीहरु थप्न पनि सक्छन् ।
पैसा थपेमा पुतलीलाई छुदाँ विभिन्न किसिमका कामोत्तेजक आवाजहरु निकाल्न पनि सकिन्छ । यदी प्रयोगकर्ताले केही पैसा थपेमा यौन पुतलीसंगको डेटिङको समय बढाउन पनि सक्ने सुविधा कम्पनीले दिएको छ ।
यि यौन पुतलीसंग एक रात विताउन प्रयोगकर्ताले ४ हजार ६ सय रुपैंया तिर्नुपर्छ । तर पहिलो पटक बुकिङ गर्दा घरौटी वापत १ लाख २४ हजार रुपैंया तिर्नुपर्छ । जुन रकम पछि भाडामा लिएको शर्त र दिन अनुसार कट्टा गरेर कम्पनीले फिर्ता गर्ने गर्छ । कम्पनीले तयार पारेका यि सेक्स डलहरु मानिसले जस्तै गरेर आनन्द दिने किसिमको रहेको कम्पनीले दावा गरेको छ ।
चीनमा पुरुषको जनसंख्या बढी भएको कारण धेरै पुरुषहरु अविवाहित बस्नु पर्ने अवस्था आएको छ । यो वाहेक धेरै पुरुषहरुको घरवार बिग्रिएको कारण पनि एक्लो हुदैं गएका छन् । यस्तो अवस्थामा आएको यौन खेलौना भाडामा पाईने अवधारणाले धेरै पुरुषहरुलाई राहत दिएको छ ।